SomaliaReport: Bila Quban Gobolkii u Danbeeyey Gooni u Istaaga
Beelaha dega gobolka Bilaquban(Bila Quba) ayaa u codeeyey inay ka go’aan Somaaliya ka dib shirar ay muddo sanad ah isugu imanayeen qabaa’ilada, culumo u diinka gobolka oo ay ka soo qayb galeen odayo-dhaqameedyada, ururada hooyooyinka, aqoonyahanka iyo dhalinyarada u dhalatay gobolkaa.
Ku dhawaaqiddan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay gobolo kale sida Jubbaland ay ku dhawaaqeen inay gooni isaga taagayaan xasilooni darida ka taagan Soomaaliya oo ay ku dayan doonaan ismaamul goboleedyada ay ka midka yihiin Somaliland iyo Puntland. Gobolkan ayaa ku yaala inta u dhaxaysa Fah oo 30Km magaalada Xarardheere xagga waqooyi kaga began Hurow, 1Km-na u jirta xaafadad Hilawe Gab, wuxuuna gobolku leeyahay dhul-xeebeed gaadhaya 700Mile.
Gobolka ayaa ka koobnaan doona afar magaalo oo kala ah Ceeldheere,Waxweyn,Galad iyo Bilaquban. Wuxuuna yeelan doonaa 20 degmo. Sheekhoowgaab ayaa noqon doonta caasimadda gobolka maadaama ay tahay meel istaraatiijiyadeed. Gobolku wuxuu yeelan doonaa madaxweyne, Ra’iisal wasaare,Xoghayn iyo afhayeen. C/caziiz Muxumed Cili(Dacay) oo loo doortay afhayeenka Gobolka ayaa u sheegay wargayska Somalia Report inay soo dhawayn doonaan ismaamul goboleed kasta inta ay nabad iyo horumarba la doonayaan dalka.
Mar wax laga waydiiyey inay aqoonsan yihiin dawladda ku meelgaadhka ah iyo doorka ay Al-Shabaab ku leedahay waddanka, ayuu Afhayeenku ku jawaabay inay aqoonsan yihiin lana shaqaynayaan Dawladda ku meel gaadhka ah balse aanay wax Al-Shabaab ahi ka jirin gobolka in kasta oo ay jiraan xaafado yar oo ay AlShababa maamulaan, wuxuuna intaa sii raaciyey inaysan ku talo jirin wax dagaalo ah ee ay wadaan nabad iyo horumar. Mudane Cabdi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka ay UN.tu qabanqaabisay ee ka socda magaalada Nairobi haddi lagu martiqaado.
Afhayeenka ayaa yidhi “Abaaro ba’an ayaa aafeeyey gobolka sanadihii u danbeeyey, kaalmaduna aad bay u yarayd, ilaa afar sanadoodna wax roobab ah kama di’in gobolka,dadku aad bay u dhibaataysan yihiin, xooluhuna waxay u dhamaanayaan macluul iyo cuduro. ICRC iyo WFP ayaa gargaar kooban gaadhsiiyey gobolka “ Ma cadda sida ay dawlad goboleedkan cusubi isu bixin doonto.